Year 19832 Year 19931 Year 19943 Year 19951 Year 19971 Year 20012 Year 20032 Year 20084 Year 20092
Model: Zimbabwe Pic 1b
1983 - Zimbabwe Pic 1b 2 Dollars banknote
Country and Pick Number:Zimbabwe pick 1bBanknote Series: 1983 issueFirst Year of Issue:1983Denomination and Currency:DollarIssue Type: Regular IssueNote: Images are for reference. The the banknote number shown in the image won't be sent...
Model: Zimbabwe Pic 2c
1983 - Zimbabwe Pic 2c 5 Dollars banknote
Country and Pick Number:Zimbabwe pick 2cBanknote Series: 1983 issueFirst Year of Issue:1983Denomination and Currency:DollarIssue Type: Regular IssueNote: Images are for reference. The the banknote number shown in the image won't be sent...
Model: Zimbabwe Pic 4c
1993 - Zimbabwe Pic 4c 20 Dollars banknote
Country and Pick Number:Zimbabwe pick4cBanknote Series: 1993 issueFirst Year of Issue:1993Denomination and Currency:DollarIssue Type: Regular IssueNote: Images are for reference. The the banknote number shown in the image won't be sent...
Model: Zimbabwe Pic 1c
1994 - Zimbabwe Pic 1c 2 Dollars banknote
Country and Pick Number:Zimbabwe pick1cBanknote Series: 1994 issueFirst Year of Issue:1994Denomination and Currency:DollarIssue Type: Regular IssueNote: Images are for reference. The the banknote number shown in the image won't be sent...
Model: Zimbabwe Pic 2e
1994 - Zimbabwe Pic 2e 5 Dollars banknote tip B
Country and Pick Number:Zimbabwe pick2eBanknote Series: 1994 issueFirst Year of Issue:1994Denomination and Currency:DollarIssue Type: Regular IssueNote: Images are for reference. The the banknote number shown in the image won't be sent...
Model: Zimbabwe Pic 8
1994 - Zimbabwe Pic 8 50 Dollars banknote
Country and Pick Number:Zimbabwe pick8Banknote Series: 1994 issueFirst Year of Issue:1994Denomination and Currency:DollarIssue Type: Regular IssueNote: Images are for reference. The the banknote number shown in the image won't be sent...
Model: Zimbabwe Pic 9
1995 - Zimbabwe Pic 9 50 Dollars banknote
Country and Pick Number:Zimbabwe pick 9Banknote Series: 1995 issueFirst Year of Issue:1995Denomination and Currency:DollarIssue Type: Regular IssueNote: Images are for reference. The the banknote number shown in the image won't be sent...
Model: Zimbabwe Pic 5b
1997 - Zimbabwe Pic 5b 5 Dollars banknote
Country and Pick Number:Zimbabwe pick 5bBanknote Series: 1997 issueFirst Year of Issue:1997Denomination and Currency:DollarIssue Type: Regular IssueNote: Images are for reference. The the banknote number shown in the image won't be sent...
Model: Zimbabwe Pic 10
2001 - Zimbabwe Pic 10 500 Dollars banknote
Country and Pick Number:Zimbabwe pick 10Banknote Series: 2001 issueFirst Year of Issue:2001Denomination and Currency:DollarIssue Type: Regular IssueNote: Images are for reference. The the banknote number shown in the image won't be sent...
Model: Zimbabwe Pic 11a
2001 - Zimbabwe Pic 11a 500 Dollars banknote
Country and Pick Number:Zimbabwe pick 11aBanknote Series: 2001 issueFirst Year of Issue:2001Denomination and Currency:DollarIssue Type: Regular IssueNote: Images are for reference. The the banknote number shown in the image won't be sent...
Model: Zimbabwe Pic 12b
2003 - Zimbabwe Pic 12b 1000 Dollars banknote
Country and Pick Number:Zimbabwe pick 12bBanknote Series: 2003 issueFirst Year of Issue:2003Denomination and Currency:DollarIssue Type: Regular IssueNote: Images are for reference. The the banknote number shown in the image won't be sent...
Model: Zimbabwe Pic 38